Niala tamin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, Mussalim Afandiyev
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Niala tamin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, Mussalim Afandiyev
Araka ny loharanom-baovao eTN, Gaga i Mussalim Afandiyev nijanona tamin'ny asany be karama tao amin'ny UNWTO taorian'ny fianjerany tamin'ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili.
Andrasana ny hipetrahany indray any New York ary hisolo tena azy UNWTO ao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana.
Matetika i Mussalim Afandiyev dia lehilahy tanana ankavanana ho an'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili. Avy any Azerbaijan Andriamatoa Afandiyev ary hita ho mpanao politika somary zokinjokiny ao amin'ny governemanta Azerbaijani. Niampanga azy ho olona natahoran'ny maro miasa ao amin'ny UNWTO ny ao anatiny.
Raha ny loharanom-baovao miafina UNWTO dia maro no nahita an'Andriamatoa Afandiyev ho "mpampihatra" an'ny Sekretera Jeneraly. Nanomboka tamin'ny naha-mpifanaraka amin'ny serivisy azy tamin'ny taona 2018 izy ary nomena EURO 4000.00 isam-bolana. Tamin'ny taona 2019 dia natolotry Andriamatoa Zurab tamin'ny toerana ofisialy ary nahazo EURO 8,000.00 / volana. Noraisina ho "talen'ny fanavaozana" izy, toerana noforonina tao an-tsainy.
Izy dia nanana ny toerana ambony indrindra tao amin'ny tambajotra UNWTO. Izy dia hita ho sakaiza akaiky an'i Mr.Pololikashvili.
eTN tsy afaka nanamafy ny fampahalalana tamin'ny UNWTO.
FAA dia nanambara i Florida Atsimo ho faritra tsy misy drone mandritra ny Super Bowl LIV
Ekho Surf Hotel Bentota dia manolotra vavahady tonga lafatra mankany Sri Lanka